आजबाट छठ पर्ब शुरू ! - Himalayan Dristi
आजबाट छठ पर्ब शुरू !
२२ कार्तिक २०७८, सोमबार ०९:२२ मा प्रकाशित
SHARES | 34
विशेष रूपमा नेपालको मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा तराई मधेशमा मनाइने छठ पर्व आज साेमबारदेखि विधिवत् रूपमा सुरू भएको छ । कार्तिक शुक्ल चतुदर्शी छठको पहिलो दिन हो । यस दिनदेखि छठ पर्व आरम्भ हुन्छ । छठको पहिलो दिनलाई ‘नहाय खाय’ भनिन्छ । यस दिन बिहान सरसफाइ गरी नुहाएर शुद्ध भोजन ग्रहण गरिन्छ ।
Posted in कला /जीवनशैली, समाज
‘टुक्कामाथि टुक्का’ व्यङ्ग्यात्मक टुक्का लेखन अभ्यासको सातौं शृङ्खला सम्पन्न; ४१ जना सर्जकहरूको सहभागीता
दाङमा जीप दुर्घटना : एक जनाको मृत्यु, १६ जना घाइते